Messi Airlines: Xogta Gudaha Diyaarad Si Gaarka Ah Loogu Farsameeyey Messi Iyo Waxyaabaha Qariibka Ah Ee Laga Helayo | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(12-12-2018) Xiddiga kooxda kubadda cagta Barcelona ee Lionel Messi ayaa markii ugu horreysay loo sameeyey diyaarad u gaar ah oo naqshad cusub loogu sameeyey, taas oo uu ku tegikaro meel kasta oo uu ka doono dunida. 31 jirkan reer Argentine iyo qoyskiisa ayaa iyagoo raaxaysanaya meel kasta oo dunida ah ka degi kara, iyadoo ay ku dhex damaashaadayaan diyaarad qurux badan oo farsamo gaar ah loogu sameeyey, taas oo gudaheeda lagu qurxiyey magacyada carruurta uu dhalay iyo xaaskiisa. Diyaaraddan gaarka ah ayaa waxay awood u leedahay inay qaaddo qoyska Lionel Messi iyo weliba asxaabtiisa oo dhan, waxaana loo sameeyey sarriiro nooca raaxada ah oo hurdo, laba xamaam oo lagu maydho, musqulo iyo madbakhii cuntada lagu karsanayay.
Shirkad fadhigeedu yahay dalka Argentine ayaa soo bandhigtay sawirrada gudaha ee diyaaraddan oo ay iyadu ugu talo gashay Messi, waxaana marka gudaheeda la galo loogu tegayaa siddeed sariirood oo ay ku xeexanayaan Messi iyo qoyskiisu, waxaana u dheer 16 kursi oo loogu talo=galay in lagu fadhiisto marka ay diyaaraddu hawada gelayso amaba soo fadhiisanayso.
Diyaaradda ayaa waxa dusheeda ku qoran lambarka uu laacibka reer Argentine xidho ee 10 oo xagga dambe far-waaweyn oo muuqata lagaga xardhay, taas oo qof walba oo arka uu ku garan doono inay tahay diyaaraddii Lionel Messi. Kaabadaha diyaaradda gudaheeda ayaa waxa lagu taxay magacyada Messi, saddexdiisa carruurta ah iyo xaaskiisa, waxaana jaranjarada u hoosaysa ku qoran Mateo, waxa ku xiga Ciro, Thiago ayaa saddexaad ah, Antonella oo marwadiisa ah ayaa ubadka ka sarraysa halka Lionel Messi uu figta ugu sarraysa ku xardhan yahay.
Inkasta oo Lionel Messi aanu iibsanin, wax lacg ahna ka bixin diyaaraddan, haddana shirkadda samaysay ee fadhigeedu yahay Argentina waxay u aragtaa inay u tahay qaab xayeysiin ah oo ay mustaqbalka faa’iido badan ku heli doonto.